Battle.net Store Gift Card $50 USD ~ ICT.com.mm
HomeBattle.net Store Gift Card $50 USD
Battle.net Store Gift Card $50 USD
Use Battle.net balance to buy World of Warcraft realm transfers and other paid services, as well as digital versions of Blizzard games like Diablo III and StarCraft II. You can also use... [Learn more]
Brand: BattlenetFilter by: Gaming Gift Cards, pcmm
World of Warcraft realm transfers နဲ့အခြား ဝယ်ယူအသုံးပြုရတဲ့ဆားဗစ်တွေကို ဝယ်ယူဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Battle.net Store Gift ကတ် (USD $50 တန်) ဖြစ်ပါတယ်။ Blizzard ဂိမ်းရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗားရှင်းတွေဖြစ်တဲ့ Diablo III နဲ့ StarCraft II တို့လို ဂိမ်းတွေကို ဝယ်ယူဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သလို World of Warcraft နဲ့ Hearthstone တို့လို ဂိမ်းတွေထဲက Items တွေကို ဝယ်ဖို့အတွက်လည်း Battle.net ကတ်ကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
[ Battle.net ကတ် အသုံးပြုနည်း]
1. Battlenet ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို Login ဝင်ပါ။ “Games & Codes” ကိုနှိပ်ပြီး “Code Redemption” ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
2. ကတ်မှာပါတဲ့ကုဒ်ကို ထည့်သွင်းပေးပြီး “Redeem Code” ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
3. မိမိရဲ့အကောင့်ထဲသို့ Battle.net Gift Card ကိုအောင်မြင်စွာထည့်သွင်းပြီးပါပြီ။